Ahoana ny fomba ahafahana miverimberina ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny TOP PR ao amin'ny Google?
Backlinks dia tena manan-danja ho an'ny loharanon-tranonkala rehetra na tranokala orinasa eo an-toerana na orinasa lehibe antserasera antserasera. Afaka mahazo rohy ivelany ianao amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokala hafa mifandraika amin'ny tranokala hafa na mampiasa ny famoahana bilaogy na famoahana lahatsoratra amin'ny tsoratadidy sosialy sy tambajotra sosialy. Misy fomba lehibe ahafahana mamorona rohy. Na izany aza, maro ireo fomba matihanina hafa hanamboarana rohy amin'ny tranonkala.
Nahoana ianao no mila mampiasa tranonkala TOP PRESS ho an'ny backlinks?
Mba hahazoana pejy PageRank avo ary hampitombo ny lisitry ny habaka, mila manorina rohy amin'ny tranokalan'ny TOP PR ianao. Ny tompon'ny tranokala rehetra dia te-hahazo ny rohy avy amin'ny loharanom-baovaon'ny PR, izany no mahatonga anao ho sahiran-tsaina amin'ny fahazoana miditra amin'ireo tranonkala. Ankoatra izany, ireny karazana tranonkala ireny dia tsy mamela afa-tsy noforonina ao amin'ny pejiny. Ny rohy Nofollow dia tsy hitondra sira fifandraisana amin'ny tranokalanao raha toa ka napetraka ao amin'ny tranonkala manampahefana na spammy. Izany no mahatonga ny zavatra ilainao dia rohy dofollow izay afaka manangana ny toerana misy anao ary manampy ny ezaka fanatsarana ny fikarohana.
Na dia izany aza, betsaka ireo tranonkala TOP PR izay misy ny backlinks dofollow. Andeha hodinihintsika ny sasany amin'ireny loharanom-baovao ireny.
Google+ dia mitarika tambajotra sosialy izay napetraka ao amin'ny TOP PageRank miaraka amin'ny marika avo indrindra
. Ao amin'io sehatra io dia afaka manamboatra bakolava nofolo na dofollow ianao.
Voalohany indrindra, mila miditra ny kaonty Google+ anao ianao ary manamarina izany. Ataovy azo antoka fa manana mailaka ianao ao amin'ny Gmail. Avy eo dia mandehana any amin'ny pejin-tranonao ary tsindrio ny fizarana "About". Aorian'io horonana io dia midina ao amin'ny "Links" ary tsindrio ny safidy "Manova". Azonao atao ny manampy ny rohy ao amin'ity fizarana ity, ary ho lasa dofollow automatique izy ireo.
Ity sehatry ny fampahalalam-baovao ity dia malaza amin'ny androntsika. Olona an-tapitrisany no manokatra izany isan'andro ho an'ny fanabeazana sy fialamboly. Izany no antony maha-ara-drariny ny fampiasana an'io loharanom-baovao PR9 io ho tombontsoanao. Azonao atao koa ny manangana rohy dofollow sy nofollow.
Raha YouTube dia sehatra fampitam-baovao amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao voafetra, azonao ampidirina ny blôginao na ny tranokalanao ao amin'ny tranokalanao "About" na "Description". Ireo rohy ireo dia heverina ho nofafana toy izany ka tsy mitondra saka fifandraisana mivantana amin'ny tranokalanao. Na izany aza, raha mametraka ny rohy mankany amin'ny sehatra "Associated Website" ianao, dia manana ny vintana rehetra hahazo ny backlinks dofollow.
Satria maro ireo mpitoraka bilaogy video izay mandefa ny lahatsariny ao amin'ny YouTube amin'ny fomba mahazatra, dia afaka mametraka fifandraisana ara-barotra amin'izy ireo. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mitady mpamaham-bolongana mamorona lahatsary na lohahevitra mifandraika amin'ny anao ary mangataka azy hiasa. Azo inoana fa hahazo valiny mahafa-po ianao satria ny ankamaroan'ny bilaogera dia mitady fanohanana ara-bola.
Mba hahazoana rohy amin'ny dofollow ao amin'ny YouTube, tokony hanamarina ny kaontinao ianao amin'ny fampiasana rohy ary mametraka ny tranokalanao amin'ny Google Webmasters. Avy eo dia mila miditra ao amin'ny kaontinao YouTube ianao ary nisafidy asa "Channel Setting" ary farany tsindrio amin'ny "view Additional Features. "Eo ambanin'ilay sehatra ampitomboina, azonao atao ny manampy ny tranokalanao amin'ny sehatra" mifandray amin'ny Website " Source .